Ulobizela ukuqopha umlando wabambalwa kwezomphebezo uDjokovic - Bayede News
Isithombe: nguGonzalo Fuentes/Reuters
Umdlali womphebezo uNovak Djokovic uzimisele ukuzifaka emlandweni osuthathe iminyaka uhlezi. Lowo mlando awufunayo uDjokovic ongowokudabuka eSerbia, owokuthi abe umdlali wesithathu ukunqoba imiqhudelwano yeGrand Slam yonke ngonyaka owodwa.
Imiqhudelwano yeGrand Slam lapho kusuke kubalwa i-Australian Open, iFrench Open, iWimbledon ne-US Open. Le miqhudelwano iyona ehamba phambili emhlabeni wonke jikelele uma kuziwa kwezomphebezo.
Abantu abaseke bakwazi ukuzenzela lowo mlando uDon Budge akwenza ngonyaka we-1937, kwaba uRod Laver akwenza kabili ngonyaka we-1962 nangonyaka we-1969. UDjokovic oneminyaka yobudala engama-34 kulo nyaka usenqobe i-Australian Open neFrench Open yona ayinqobe ngeledlule. Kowamanqamu uhlule umdlali waseGreece uStefano Tsitsipas (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).
“Konke kungenzeka empilweni, kungangenzeka ngesikhathi ofisa ngaso kodwa ekugcineni kuyenzeka uphumelele. Uhambo lwami lube nzima kakhulu, kuyangithusa ukuthi namuhla ngibalwa nabadlali abahamba phambili kulo mdlalo. Ngikholwa ukuthi abazi lapho engisuka khona ngiyisikhuthazi esikhulu kubona” kusho uDjokovic.
Eqhuba uthe; “Leli joka engizibekele lona likhulu kakhulu ngoba into okunzima ngempela ukuthi yenzeke, ngikhuluma nje kwabesilisa umuntu owagcina ukubeka leli rekhodi ngangingakazalwa, kanti kwabesifazane nakhona uyedwa nje vo. Lokhu kungitshela ukuthi kumele ngisebenze kanzima” usho kanje.
Kwabesifazane uyedwa onaleli rekhodi lowo uSteffi Graf walibeka wabe esenqoba nendondo yegolide emqhudelwanweni we-Olympics. “Uma kungase kuthiwa ngempela konke kuyenzeka engikufisayo kobe kusho ukuthi ngisebenzile impela, koba unyaka engingasoze ngawukhohlwa. Ngikholwa ukuthi ngobe ngiwubekile umlando. Namanje ngisasho akukho okungenzeki, sengizuze izinto abaningi abangakaze becabange ukuthi ngoke ngizizuze nami imbala angikaze ngizicabange kodwa namuhla kwenzekile. Ubani ozihola phambili emhlabeni kwabesilisa imina uqobo” usho kanje.
Uthe akubheke kakhulu ukunqoba nendondo yegolide ku-Olympics ezokuba seToyko nonyaka. UDjokovic oqeqeshwa uMaria Vadja noGoran Ivanisevic usenqobe imiqhudelwano yeGrand Slam eli-19.
I-Australian Open useyinqobe kayisi-9 (ngonyaka wezi-2018, wezi-2011, wezi-2012, wezi-2013, wezi-2015, wezi-2016, wezi-2019, wezi-2020 nangowezi-2021), iWimbledon ayinqobe ka-5 (ngonyaka wezi-2011, wezi-2014, wezi-2015, wezi-2018 nangowezi-2019). I-US Open uyinqobe kathathu (ngonyaka wezi-2011, wezi-2015 nangowezi-2018), kuthi iFrench Open yona uyinqobe kabili ngonyaka wezi-2016 nangonyaka wezi-2021. Unendondo yethusi ayinqoba eBeijing ngonyaka wezi-2008.
UVajda onesikhathi eside eqeqesha uDjokovic uthe okwenzeke ngeledlule sebekhohliwe ikhona baphokophele phambili manje. “Esikufunayo singabaqeqeshi nokufunwa uyena uDjokovic ukuzibekela umlando kulo nyaka. Uma kungathiwa impela lokho kuyenzeka kobe impela sibe nonyaka omuhle kakhulu. Iqiniso esigxile kakhulu kukhona manje ukuthi enze kahle kuma-Olympics, ukwenza kahle kwakhe ukuthi abuye nendondo yegolide bese siyaqhubeka” usho kanje uVadja.
Lo mqeqeshi uthe uDjokovic emdlalweni yakhe edlule akakhombisaka nhlobo ukuthi iminyaka ihambile. “Udlalise okwengane encane, akakhombisanga ukuthi ukhulile lokho kunginika ithemba lokuthi nakanjani uzokwenza kahle. Uyakuthanda kakhulu ukudlala iWimbledon ne-US Open, ngikholwa ukuthi ukuthanda kwakhe kuzomenza ukuthi anqobe sizifake emlandweni” usho kanje uVajda.
nguSabelo Maphumulo Jun 18, 2021